Computer ကို ကိုယ်ပိတ်စေချင်တဲ့အချိန်မှာ ပိတ်အောင် ဘယ်လိုပြုလုပ်မလဲ? – MyTech Myanmar
Computer ကို ကိုယ်ပိတ်စေချင်တဲ့အချိန်မှာ ပိတ်အောင် ဘယ်လိုပြုလုပ်မလဲ?
တခါတလေ ကိုယ့်ကွန်ပျူတာမှာ File တစ်ခုခု Copy ကူးနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Download ဆွဲနေတာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြုလုပ်နေတုန်း အပြင်သွားစရာပေါ်လာတဲ့အခါမှာ ကွန်ပျူတာကို ပိတ်သွားလို့လည်းမရ၊ ပြီးတဲ့ထိ စောင့်နေလို့လည်း အဆင်မပြေဖြစ်တာမျိုးကြုံဖူးကြမှာပါ။ အဲ့ဒီအတွက် Software သွင်းစရာမလိုပဲ Shortcut လေးတစ်ခုနှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ ကိုယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ရောက်ရင် ကွန်ပျူတာကို အလိုအလျောက်ပိတ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲဆိုရင် Desktop မှာ Right Click နှိပ်ပြီး New – Shortcut ကိုရွေးချယ်ပြီး “shutdown -s -t XXXX” (XXXX က ဘယ်အချိန်ကြာပြီးရင် စက်ပိတ်မလဲဆိုတာကို ခိုင်းစေတာဖြစ်ပြီး Seconds နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် ၁ နာရီအကြာမှာ ပိတ်စေချင်ရင် “shutdown -s -t 3600”, ၂ နာရီအကြာမှာ ပိတ်စေချင်တယ်ဆိုရင် “shutdown -s -t 7200”) ဆိုပြီး ရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ Shutdown ချချင်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ Restart ပြုလုပ်မှာဆိုရင် “shutdown -r -t XXXX” ဆိုပြီး “s” နေရာမှာ “r” ပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးရင် Shortcut name နဲ့ Shortcut icon ကို ကြိုက်နှစ်သက်ရာထားပြီး Shortcut ကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့ သတ်မှတ်တဲ့အချိန်မှာ ပိတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ အချိန်သတ်မှတ်မိထားပြီး ပြန် Cancel ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အပေါ်ကအတိုင်းပဲ Shortcut အသစ်ပြုလုပ်ပြီး Command နေရာမှာ “shutdown -a” ဆိုပြီး Shortcut အသစ်ပြုလုပ်ပြီး Shortcut ကိုနှိပ်ပြီး အချိန်သတ်မှတ်ထားတာကို ပြန်ဖျက်နိုင်မှာပါ။
တကယ်လို့ Shortcut ထားပြီးအသုံးမပြုချင်ဘူးဆိုရင် Windows + R တွဲနှိပ်ပြီး Run Box မှာ အပေါ်က နှစ်သက်ရာ Command ကို ရိုက်လိုက်တာကလည်း တူတူပဲဖြစ်မှာပါ။
Command ဒါမှမဟုတ် Shortcut တွေအသုံးမပြုချင်ဘူးဆိုရင်တော့ ဒီ PC Sleep နဲ့ Sleep Timer Software ၂ ခုက အလားတူ Functions တွေကို စွမ်းဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
MyTech Myanmar2018-05-13T16:26:01+06:30May 13th, 2018|Computers, HowTo|